Wiil Soomaali ah oo jago wayn ka helay ururka OIC - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Cabdixaafid Xuseen Axmed
Cabdixaafid Xuseen Axmed ayaa loo magacaabay in uu Soomaaliya u matalo Golaha Iskaashiga Islaamka (OIC) qaybtiisa dhaliyarada.
Golahan waxa la bilaabay sannadkii 1969, waxa ku midaysan dalal gaaraya 57, Goluhu wuxu ka shaqeeyaa danaha wadamada Muslimka sida horumarka, Nabadda iyo Iskaashiga, sidoo kale wuxuu wada shaqayn la leeyahay Qaramada Midoobay iyo Midowga Yurub.
Cabdixaafid Xuseen Axmed, wuxuu tacliintiisa ilaa heer dugsi sare ku qaatay dalka Soomaaliya, aqoonta Jaamacada wuxuu ku diyaariyay wadanka Suudan halkaas ayuu ka bilaabay ka qayb galka horumarka dhaliyarada, sannadkii 2017-kii wuxuu ka qayb galay samayntii Golaha dhaliyarada Qaranka Soomaaliya oo ay iska kaashadeen dowladdii federaalka iyo Maamul goboleedyada. Wuxuu ka mid noqday sagaal xubnood oo uu markii danbe ka noqday Gudoomiyaha golaha dhalinyarada qaranka, Soomaaliya.
''Magacabistan waxay ku timid dadaal ay bilowday wasaaradda dhalinyarada taas oo lagu raadinayay in dib loo soo celiyo kaalimihii dhalinyarada Soomaaliya ay ku lahaayeen Dunida. Kaddib wasaaradu waxey la xariirtay xarunta golaha iskaashiga Islaamka, waxaa la ogaaday in Soomaliya mudo dheer ay ka maqnayd booskan oo uu banan yahay, dawladu waxey go'aansatay in booskaas la buuxiyo. Maadaama aan ahaa gudomiyihii Golaha Dhalinyarada, aniga ayaa lay magacaabay,'' sidaa waxa BBC-da u sheegay Cabdixaafid.
Xubno sare oo ka socday Ururka OIC ayaa dhammaadkii sannadkii hore ku shiray magaalada Muqdisho kuwaas oo ka hadlay maalgashiga Soomaaliya iyo sida loo taageerayo dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
''Magacaabistayda waxey ka danbaysay wadatashi ay sameysay wasaaradda dhalinyarada iyo ururada ciyaaraha, kaddib maadaama aan nahay dhalinyaradii ugu sareysay Qaranka, gudoomiyahoodiina aniga aan ahay, sidaas ayay wasaaraddu u garatay magacaabistayda, sababtuna waxey tahay, waddamada xubnaha ka ah Golaha Iskaashiga, waxaa dal walba k matala gudomiyaha dhalinyaradooda.''
Golaha Iskaashiga Islaamaka xaruntiisa ugu wayn waxay ku taallaa Sucuudiga iyo Turkiga, qeybta dhalinyarada waxey ku taallaa Istanbuul ee dalka Turkiga. Golahan ayaa ka kooban qaybo kala duwan oo ay ka mid yihiin siyaasadda, dhaqaalaha, haweenka iwm.
Qaybta dhalinyarada ee golaha Iskaashiga Islaamka waxaa la billaabay sannadkii 2005, wadamada xubnaha ka ah golaha ayaa go'aamiyay in dhalinyarada lagu soo daro golaha, kaddib waxaa hawshii la wareegay wasaradaha dhaliyarada iyo ciyaaraha wadamada xubnaha ka ah, kadibna waxa la sameeyay dhalinyarada golaha iskaashiga Islaamka.
Waxa ugu badan ee dhalinyaradan ka shaqeeyaan ayaa ah sidii laysugu xiri lahaa dhalinyrada wadamada Islaamka, si ay dhalinyaradu isku dhaafsadaan fikirka wanaagsan, mustaqbalkana loo diyaarin lahaa jiil cusub oo haga hogaanka dalalka Islaamka.